Apple na-esonye na mkpakọrịta nke na-akwalite iwu maka nchịkọta nke ume | Esi m mac
Izu gara aga anyị mụtara na Apple bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara gburugburu ebe obibi . Otu n'ime ọrụ ọ na-arụ bụ mmepụta ume na mbara igwe ma ọ bụ ogwe igwe n’elu ụlọ ụlọ mmepụta ihe ya gburugburu ụwa.
Mana ike nwere ụbọchị mmebi, ya bụ, a ga-eri ya, kpokọtara ma ọ bụ tufuo. Ruo ugbu a, iwu banyere nchịkọta nke ike esiteghi ike nke ọma na ọbụlagodi ka enwere ike ịkwakọba ya ka ebunye ya na ndị ọzọ ma ọ bụ ọbụna mba ọzọ. Ma mkpakọrịta mara dị ka Advanced Energy Economy na nke Apple nwe, choro iwepu ihe mgbochi ndi a.
Na mkpakọrịta a, ọtụtụ mba dị iche iche ndị raara nye imepụta ngwaahịa dị iche iche, site na ụgbọ ala, igwe ọrụ, ma ọ bụ ngwaahịa elektrọnik. Anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ dịka: Njikwa Johnson, Schneider Electric, GE, AES na ndị dike ume: SunPower na Solar First. Companieslọ ọrụ ndị a niile dabere na ike iji mepụta ngwaahịa.
Na United States, iwu na-achịkwa ndị Federal Iwu Iwu Commission na nke a chịrị na ọ ga-ekwe omume ịgba ụgwọ batrị site na ntanetị eletriki ma nweta uru maka ngafe nke onye nrụpụta anaghị eri. Nke a ga - eme ka ike dị ọnụ ala ma ghara ịla n’iyi, ebe ọ bụ na ọ ga - ekwe omume ịkọkọtara ya maka iji ya mee ihe ọzọ ma nyefee ụlọ ọrụ ahụ ike dị anya site na isi ike ọkụ.
Ihe mkpakọrịta ahụ chọrọ Advanced Energy Economy nke Apple na-ekere òkè bụ ịmata ụkpụrụ a kapịrị ọnụ maka omume a, ka ha wee nwee ike mejuputa atụmatụ ike ha gburugburu ụwa.
Ka anyị cheta na Apple tinye ike na 2017 a ọtụtụ ọrụ ike, na-egosipụta usoro ndị a malitere na China site n'aka Ọlaedo na ịmepụta ụlọ ọrụ enyemaka maka njikwa ike dị ka Ike Apple.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na-esonye na mkpakọrịta nke na-akwalite iwu maka nchịkọta nke ume
Nke atọ na-esote mmelite nke Isi Nkata, maka Mac